စစ်ကိုင်းမြို့သမိုင်းဝင် ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီးအား အဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်း စတင? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းမြို့သမိုင်းဝင် ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီးအား အဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်း စတင?
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၏အထင်ကရ သမိုင်းဝင်ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီးမှ ရွှေဆေးသင်္ကန်းများခွာချွတ်၍အ ဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူမှုလုပ်ငန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ညနေမှစတင်ကာ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီးတွင် ကပ်လှူထားသည့်ရွှေ ရောင်ဆေးသင်္ကန်းမှ အဖြူရောင် ဆေးသင်္ကန်း ပြောင်းလဲကပ်လှူရန်အတွက်သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်မှစတင်ကာ အောင်ပြည်တန်ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စေတီတော်ကြီး၌ ကပ်လှူထားသော ရွှေရောင်ဆေးသားများ ခွာချခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက်ကပြီးစီးခဲ့သည့်အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် စေတီ တော်လုံးတော်ကြီးအား ရာသီဥတု ဒဏ်ခံ Flexible Protective Coating (Mapelastic) များစတင်သုတ်လိမ်းခဲ့သည်။
”တပေါင်းလပြည့်နေ့ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေးနေ့အမီ ပြီးစီးအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင် အားလုံးမွမ်းမံပြီးစီးပြီ ဖြစ်တာ ကြောင့် အဖြူရောင်ဆေးသုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ဒီနေ့အထိအားလုံး ပြီးပြည့်စုံပြီးစီးခဲ့တာ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဆေးဖြူ သင်္ကန်းကပ်လှူမှုနဲ့ ဆေးဖြူသင်္ကန်းသုတ်ပြီးတာနဲ့ အပေါ်ကနေလိုက် ကာပြန်သုတ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်”ဟု ကောင်းမှုတော်စေတီ တော်ဂေါပကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနီတင်က ပြောကြားသည်။ တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ကောင်းမှုတော်စေတီတော်ရင်ပြင် တော်တွင်သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ ဖြင့် အနေကဇာတင်၍အဆိုပါ သံဃာ တော်များအား ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်း လှူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး တောင်သာမြို့နယ်?
''အရမ်းကြီး မိန်းမဆန်တဲ့ ကာရိုက်တာမျိုး မဟုတ်ရင် ကျန်တဲ့ ကာရိုက်တာတွေက ယမင်းနဲ့ လိုက်တယ်လို
ကျပ်သန်း၂၅ဝနီးပါး အကုန်အကျခံ၍ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်ခြောက်မြို့နယ်၌ တိရစ္ဆာန် အသက်ကယ်ကုန်း ခြောက်ခု တည်ဆောက်
အနုပညာလောကသားများ တောင်းဆိုသော ဆင်ဆာမူသုံးချက် လျှော့ပေါ့ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်?